Muuse Biixi Oo Weedho Kulul Oo Garnaqsi Ah Ku Hurgufay Hogaamiyayaasha Mucaarika Iyo Madashii Kulmisay | FooreNews
Home wararka Muuse Biixi Oo Weedho Kulul Oo Garnaqsi Ah Ku Hurgufay Hogaamiyayaasha Mucaarika Iyo Madashii Kulmisay
Muuse Biixi Oo Weedho Kulul Oo Garnaqsi Ah Ku Hurgufay Hogaamiyayaasha Mucaarika Iyo Madashii Kulmisay
FoorenewsOct 20, 2014wararka0
“Jamaal Waakan I Hor Fadhiyee Xaggeed Ka Keenteen Dawladdaa Doorashada Dib U Dhacaysa…….Anigu Xisbiga UCID Ayaan Mucaarid U Aqaanaa, Illayn WADDANI ……”
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha Xisbul Xaakimka Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, ayaa si adag ula garnaqsaday Hogaamiyayaasha xisbiyada Mucaaridka ah ee Somaliland isaga oo sheegay in aanay jirin meel alla meel xukuumadda iyo xisbigeedu marnaba go’aan ku gaadhay in ay doorashooyinka soo socda dib u riixaan isaga oo hogaamiyayaasha Mucaaridka ah ku dhaliilay in ay sheegaan wax aanay iska hubsan.
Dhinaca Kale Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE waxa uu sheegay in ay ka xukuumad ahaan iyo xisbigeeduba dhammeeyeen dhammaan waxyaabihii lagama maarmaanka u ahaa qabsoomidda doorashooyinka ee dhinacooda kaga aaddanaa isaga oo dhinaca kalena Sheegay in Isagu Xisbiga Ucid uun Mucaaradka Somaliland u yaqaano isla markaana Waddani Xukumadda ka qayb yahay maadaama uu xukunka dawliga ah ee dalkeena qayb muhiim ah ka hogaamiyo. Muuse Biixi Cabdi, Guddoomiyaha KULMIYE oo shalay ka jawaabayay dhaliilaha Mucaaradka ee ah in Xukumaddu doorashada lugta hayso islamarkaana muddo kordhin u xusul duuban tahay, ayaa sheegay in Xukumaddu wixii kaga aadanaa meel marisay. Guddoomiyaha KULMIYE oo ka hadlayay shir jaraa’id oo ay shalay Hogaamiyayaasha xisbiyada qaranku si wada jir ah u qabteen mar ay ka sii dhoofayeen Madaarka Hargeysa ayaa waxa uu Guddoomiyaha KULMIYE yidhi: “Jamaalna waa fadhiyayaaye, dadka beryahan dambe waxaad aad ugu sheegtaan oo aad nagu durtaan, KULMIYE doorashada waa habsaaminayaa, inay doorasho qabsoonto ma doonayo, kanuu daahiyey, keeruu habsaamiyey. Waar waynu is hor-fadhinaaye bal waxa nagu baaqday annaga noo sheega. Annaga dhawr arrimood ayaa nalaga rabay, mid waxa uu ahaa in sharcigii doorashada la hir geliyo, waanu Hir gelay. Markii uu hir galayna waxaad qoonsateen kelmad aan muddo isku haysanay oo ku murmaynay kadibna waa lagu daray oo waa naga dhammaaday, haddana waxaad tidhaahdeen dhaqaalihii doorashada lagu qabanayay hala diyaariyo, waa naga diyaar, Koomishankii waa la diyaariyey oo waxaad ogtihiin in loo gudbiyey Golaha Wakiilada oo la sugayo in la ansixiyo si ay shaqadooda ula wareegaan”.
Gudoomiyaha KULMIYE oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Komishankan lagu rafanayo ee la leeyahay waxbuu daahinayaa, sababtiisa koowaad ee hala bedelo idinkaa lahaa. Waa la soo bedelay haddaba Baarlamaankaa Fasax galay. Barlamaanka yaa xukuma ma annaga, waakan Guddoomiyihii Baarlamaanku. Sharcigii baa haddana la soo celiyay dee annaga nagamuu iman khaladka ku jiraa. Markaas garan mayno meeshan aad Xukumaddu doorasho ma rabto ka tidhaahdaan illayn gari Ilaahay bay taqaane.” ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE. Saddexda Hogaamiye ee qaranka ayaa dalka Kenya u dhoofay shalay iyaga oo dalkaasi kula soo kulmi doona deeq bixiyayaasha Somaliland ka taageera dhinaca arrimaha dimuquraadiyadda.
Previous PostFaysal Cali Waraabe Oo Waji Gabax Ku Tilmaamay Safarkooda Kenya Wakhti Wax Badani Qabyo Ka Yihiin Dalka Next PostWasaaradda Duulista Iyo Hawada Somaliland Oo Abaal Marisay Shaqaale Hawl Karnimo Muujiyey